Ctrl + C e Ctrl + V galaysa Windows e VM Linux ma Virtual Box – Taylor Lopes ツ Blog
Marka hore, Waxaan ku nuuxnuuxsanayaa in xalkaan lagu dabaqay deegaanka soo socda:
– Desktop-ka Windows 10
Dhibaatadu waxay tahay in aysan suurta gal ahayn in la minguuriyo oo la dhajiyo inta u dhexeysa Windows iyo Linux (suubban). Markaad sameyneyso CTRL + C iyo CTRL + V, waxba ma dhicin.
Xalka lagu soo jeediyay baraha internetka ayaa lagu sheegay in si loo xaliyo dhibaatadan ay ku filneyd in la rakibo xirmada “daro Guest” que vem maya Oracle VM VirtualBox, laakiin markii aan isku dayay inaan sidan sameeyo, waxaa ka dhashay qaladka soo socda:
"Failed to set up service vboxadd, fadlan hubi feylka"
Sideen u isticmaalayay Netinst (nooca caatada ah ee Debian), waxaa suurtagal ah in qaar ka mid ah barnaamijyada loo baahan yahay la waayey markii ay socdeen “daro Guest”.
Ku rakibidda xirmooyin dheeri ah:
ku habboon-hel cusboonaysiin
ku habboon-hel rakib samee gcc
ku habboon-hel rakibso Linux-madaxyada-$(magacaabi -r)
Instalação do “daro Guest”:
// PASSO 4 - rakibaadda!
// PASSO 1 No Oracle VM VirtualBox, acesse o menu Dispositivo > Inserir imagem de CD dos Adicionais para Convidado // PASSO 2 Dar duplo clique no ícone VBOXADDTIONS_5.1.24_117012 (ou outra versão) que vai aparecer na área de trabalho // PASSO 3 Abrir o terminal, acessar o caminho para o VBoxLinuxAdditions, normalmente este: cd /media/cdrom0/ // PASSO 4 - rakibaadda! sudo sh ./VBoxLinuxAdditions*.run
Após isto, não esqueça de habilitar na VMBox as opções para permitir copiar e colar (área de transferência / bi-direcional), sida hoos ku qoran:
Total Furidda: 56546
28 July 2017 Taylor Lopes	marti dheeri ah, ctrl + c, ctrl + v, gcc, vboxadd, vboxlinuxadditions, sanduuqa dalwaddii, vm, daaqadaha
9 dib u eegista “Ctrl + C e Ctrl + V galaysa Windows e VM Linux ma Virtual Box”
Gabriel ayaa sheegay in:
9 October 2018 in 17:22
What Zit Tooya ayaa sheegay in:
U shaqeeyay sidii soojiidasho. Aad ayaad u mahadsantahay
4 December 2018 in 21:39
Renato ayaa sheegay in:
Parabens xalin aan dhibaato mahadsanid
3 July 2019 in 13:00
Silvio ayaa sheegay in:
Thanks for Talo ku, Waxaa ka caawiyay wax badan oo
31 January 2020 in 8:44
Gabriela dos Reis Silva ayaa sheegay in:
Sooocorro in mashiinkeygu uusan bilaaban mar dambe kadib markii aan bixiyay amarkaas ugu dambeysay.
Dib ayaa loo bilaabay, laakiin markii aan ku qoro magaceyga iyo afgaradkayga si aan u galo shaashad madow ayaa muuqata (sida haddii ay soo galaan) kuna laabo isla shaashadda si aad u gasho magaca isticmaalaha iyo lambarka sirta ah
4 April 2020 in 13:26
Qalabkee, a VM Debian? Isku day Ctrl + Alt + F1, gal asal ahaan. Fiiri rukhsadaha feylasha / buugga ama milkiilayaasha: ls -la / hoy / USER. Eeg haddii dhab ahaantii USER milkiilaha, haddii kale, isku day: sudo chown -R USER:USER / guri / USER. U beddel USER magaca isticmaale ee aad isku deyeyso inaad gasho.
30 April 2020 in 23:22
William Gasperi ayaa sheegay in:
galab wanaagsan, halkan waxay ka shaqeysay illaa qaybta lahaanshaha laba-guji sumadda, tan iyo markii aan u sameynayo rakibidda garaafka ( Kaliya taliska).
Waxaan sameeyay ilaa markaa, oo waan kari waayey, Waxaan isku dayay inaan ku helo amar laakiin halkan kamaan heli karin, ayaa sheegay in aysan macquul aheyn in la furo feylka.
Qaar ka mid ah beddelka?
20 May 2020 in 13:52
Whellington ayaa sheegay in:
Tooop saaxiibkay, wax badan ayaa halkan iga caawiyey o /
27 July 2020 in 22:37
Leonardo Montero ayaa sheegay in:
aad u wanaagsan! Aad ayaad u mahadsantahay!
31 August 2020 in 11:17
HD via FTP la Server Filezilla iyo Windows 7 Maaddaama ay danta ku Post "Dhig HD heli karo Internet-ka via FTP", Waxaan talaabo talaabo ka dhigay in la dhiso server FTP ah in aad HD compatilhar oo aad u kombiyuutar kasta ee ku xiran internetka la heli karo (BUUXI!). Int ...
Copyright © 2022 taylorlopes.com tan Oct 2012, 3.110.666 helitaanka